ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေးသို့ ရှေ့သို့ တိုးရင်း နောက်ပြန်လှည့်ကြတော့မှာလား
ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေးသို့ ရှေ့သို့ တိုးရင်း နောက်ပြန်လှည့်ကြတော့မှာလား
ဖတ်ကြည့်ကြပါ ဒီအတိုင်းဘဲ မှီတဲ့နေရာက တင်ထားပါတယ်။
ပလေတို ဒီမို ...........သို့
ဥပမာဗျာ-တိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမရှိ..ပုဒ်မ ၄၄၅ ကိုဒီလိုပြင်တာကိုပြည်သူကလက်ခံမလက်ခံ ဆန္ဒကောက်ကြည့်မယ်လေဒါဆိုရင်.....................
(“ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ယခင် နယက အစိုးရ ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆက်ခံသည့်အတွက်နယကအစိုးရဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြသနာများကိုပြည်သူလူထုကျေနပ်သည်အထိဖြေရှင်းပေးရန်တာဝန်ရှိ သကဲ့သို့၊ နယကမှ ဆောရွက်ခဲ့သည့်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေသည့်..တစ်ခြားနိုင်ငံများ၏အကျိုးစီးပွားသက်သက်ကိုသာရည်ရွယ်သည့်လုပ်ငန်း၊စီမံကိန်းများအား..မိနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအတွက်အကျိုးယုတ်စေမည်ဟုယူဆပါက ပြန်လည်စိစစ်ဖျက်သိမ်းပြီး..ထိုစဉ်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူးများအားစုံစမ်းစိစစ်ဖေါ်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်”).................
အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကိုက..."သွားလေသူကြီးများရဲ့ ပေါက်လွပ်ပဲစားလုပ်ထားတာတွေကိုအသေအကြေဖုံးကွယ်၊ကာကွယ်ရင်း..ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရန်..." ဆိုတော့.....
နောက်ပြီး "ပလေတိုဒီမို "ကိုထပ်ပြောချင်တာက ခင်ဗျားကဒီလိုပြောခဲ့တယ်.... (...အားလုံးစဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒေါ်စုကို အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအရေးမှာတော့ ဒေါ်စုဟာ စံနမူနာ ယူစရာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ မြင်တယ်။....)
နောက်ပြီး..ခင်ဗျားရဲ့ Note ကကောင်းတယ်..၊ဒါပေမဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအပေါ်ကိုပဲအခြေခံတယ်..ကလေးဆန်တယ်..မဆိုင်တာတွေရမ်းထားတယ်..ရေရှည်မကြည့်ဘူး..၊ပြသနာတစ်မျိုးဖြစ်လိုက်..ပြန်ရှင်းလိုက်..ပြသနာတစ်ထုထပ်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖွလိုက်လုပ်နေရင်..ခင်ဗျားတို့..အခြားအလုပ်တွေလုပ်ရခက်ပြီး..ဒီအလုပ်နဲ့ပဲပင်စင်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားမယ်နော့...၊
ကို Thein Win သုံးသပ်သလို... ( လူတွေ တကယ်သိချင်တဲ့ ဦးပိုင်ရဲ့စောရ ဇာတ်လမ်း (ရှက်ရှက်) ကို ကွက်ပြီး ဖုံးထားပေးတဲ့ Post ?) ဖြစ်နေတယ်...
နံပါတ် (၁) ကတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လို့..ရယ်..
by ပလေတို ဒီမို on Friday, November 30, 2012 at 9:40pm ·
လက်ပံတောင်းတောင် အရေးတော်ပုံက တော်လှန်ရေးစိတ်ဓါတ်တွေ ပိုပြီး မြင့်မားလာစေခဲ့တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အုတ်အုတ်ကြွတ်ကြွတ် ပွက်လောရိုက်သွားတယ်။
ဒီအရေးကိစ္စမှာ ဦးသိန်းစိန် အမိန့်ပေးတယ် လို့ Freedom News Group က ပြောတယ်။ Freedom News Group ဆိုတာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ ကိုယ်ပွားပဲ ဖြစ်တယ်။
ဧရာဝတီက နှပ်ကြောင်းပေးနေတာနဲ့ Freedom News Group လိုက်ဖက်ညီအောင် လုပ်နေတာက ဦးအောင်မင်း နှုတ်ထွက်ဖို့၊ ဦးသာအေးနှုတ်ထွက်ဖို့။
အခု ဆန္ဒပြတာတွေ အရှိန်မြင့်လာတော့ လုပ်လာတာက ၈၈ တုန်းကအတိုင်းပဲ။
ဒီကိစ္စမှာ ဒေါ်စု ဘာဖြစ်လို့ အမာရှောင်ပြီး အပျော့ကို တိုက်နေတာလဲ။ အားလုံးစဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒေါ်စုကို အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအရေးမှာတော့ ဒေါ်စုဟာ စံနမူနာ ယူစရာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလို့ မြင်တယ်။
What happens when phosphoric acid comes into contact with my skin?
Can phosphoric acid hurt my eyes?
The degree of irritation caused by phosphoric acid depends upon the concentration of the solution and the duration of contact. Concentrated can cause severe burns and permanent eye damage, based on animal information. Mists may cause eye irritation. There is no human information available.
ရည်ရွယ်တာကတော့ လူစုခွဲဖို့ပဲ လုပ်ခဲ့တဲ့ သဘောပါ။ တစ်ကယ်တမ်း ဖြစ်သွားတာကတော့ အရေပြားတွေလောင်ကျွမ်းတဲ့ အထိ ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဆရာတော်တွေကလည်း စောင်ကို ရေစိမ်ပြီး ရေစိုစောင်ခြုံပြီး ဖယ်မပေးဘဲ ကျောက်ချ နေခဲ့ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဆရာတော်တွေရဲ့ အပြောအရ မျက်ရည်ယိုဗုံးကို ရေစိုအဝတ်နဲ့ ခံသာမယ်ဆိုတဲ့ အသိပဲ။
တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ဒီလို အသားတွေ ကွာကျတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်သွားစေတဲ့ အက်ဆစ်တွေ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိနိုင်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကရော ဒီလိုဖြစ်ပါစေ ဆိုပြီး အမိန့် ပေးမယ်လို့ မထင်။ လိုလားချက်က လူစုကွဲသွားဖို့ပဲ ဖြစ်မယ် ။ ဒီလိုပဲ ယူဆရတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်ကလည်း ဟိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက စတင်လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ကိစ္စ။ အခုကျမှ ဖျက်သိမ်းပစ်ရင် ဦးအောင်မင်း ပြောစလို တရုတ်ကြီးနဲ့ ဘယ်လို စခန်းသွားမလဲ။ အခုဆိုရင် တရုတ်ဘက်က ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတာ တွေ့ရတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဒီမိုဖက်တီး အမည်ခံ မေဇင်အေး (MICT Park ထဲမှာ ကွန်ပျူတာ ကူုမဏီဖြစ်ထားတဲ့ ဖက်တီးမ) ခွန်ဒီးယမ်းဆိုတာလည်း သူပဲ။ သူက အစတွေ အများကြီး ဆွဲပြီး ဖွတယ်။ ဒီဖက်တီးမက အွန်လိုင်းမှ ဒီမိုအုပ်စုခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်မြှောက်ပြီး ဒေါ်စုဘက်က တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ သူတို့အဖွဲ့နဲ့ စစ်ဗိုလ်များ အုပ်စု အပွဲပွဲနွှဲနေကြတာ။ အခုကျတော့ အချီကြီး ပိုင်ပြီ ဆိုပြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ Image ကို ၀ိုင်းပြီး ဆွဲချကြတယ်။ အမှားတစ်ကွက်က တစ်သက်စာ လို့ ဆိုရမလောက်ပဲ။
ဒေါ်စု ဘင်္ဂါလီကို ချော့မော့တုန်းက ဟိုဘက်က ဆော်ထားတာကို ကလဲ့စားပြန်ချေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာတင် ဘင်္ဂလီ အုပ်စုတွေ အညီုးနဲ့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အစိုးရကို ၀ိုင်းပြီး တွယ်ကြတာပဲ။
ဘင်္ဂလီဖြစ်စင်မှာ မကျေနပ်ချက်တွေ အခု ရောပြီး ရောတောရှိ လုပ်လာကြတာ အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့။
ဒီလိုသွေးထိုးပေးမှုတွေမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်၇တာကတော့ ဦးသိန်းစိန်ပဲ။ အမျိုးမျိုး အပုပ်ချ-အပုပ်ချလို့လည်း ကောင်းမှကောင်း။ ဒီတော့ သပိတ်စုံ အကုန်ထ-သပိတ်စုံ အကုန်ရ ဆိုတဲ့ အနေအထားကို ဦးတည်လာကြပြီ။
ဒီနေရာမှာ ဒေါ်စုက ဘာဖြစ်လို့ ရွှေပြည်အေးတရားတွေ ပေးနေသလဲ။ စဉ်းစားဖို့ အရမ်းကောင်းတယ် နော်။ ဒီမိုအုပ်စုတွေ သည်းကြီးမည်းကြီး ချနေလိုက်ကြတာ ရစ၇ာကို မရှိတော့ဘူး။
ဒီကြားထဲ Eleven နဲ့ အခြားမီဒီယာတွေကလည်း အကွက်ကောင်းတွေ့ ပြီး ဟုတ်တာရော မဟုတ်တာရော ၀ိုင်းပြီး ဆော်ကြတယ်။ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်အောင် သိထားဖို့က စိုင်းသိန်းဝင်းဆိုတာ နိုငငံတော်သစ္စာဖောက်။ တပ်ပြေး ခွေးသူုခိုး သူတောင်းစားသာသာ ပဲ။ ဒါကို ကိုးကားပြီး စာမျက်နှာပေါ် တင်လာတာကတော့ မီးလောင်ရာလေပင့် လုပ်ပစ် လိုက်တာပဲ။ ဒီမှာတင် အုံကြွမှုတွေ ပိုပြီး ဆိုးရွားလာတာကို တွေ့ရတယ်။
ရန်ကုန်နဲ့ မနလေးမှာ သပိတ်စုံ သူပုန်ထမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်လာနေပြီ။
လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စ ပြန်ကြည့်ရင် နောက်ကွယ်မှာ နိုင်င့ရေးတိုက်ကွက်တွေ အများကြီးပဲ။ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံလည်း ရောထွေးနေတယ်။ လက်ပံတောင်းတောင်ဟာ နိုင်ငံရေး လုပ်စားတွေအတွက် စင်မြင့်ဖြစ်နေတယ်။ လိမ်ဆင်တွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်းထုတ်တယ်။ လူသေကောင်တွေ ဖုတ်ဝင်တဲ့ ပါဖောမယ့်တွေ ပါတယ်။ တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးမှိုင်းလုံးတွေ ပါတယ်။ စစ်တပ်ဆန့် ကျင်ရေး တိုက်ကွက်တွေ ပါတယ်။ အစိုးရ အကျပ်တွေ့ရေး ထောင်ချောက်တွေ ပါတယ်။
ဒါကို ၂၃ ရက်နေ့က လွှတ်တော်မှာ တရားဝင် ဖော်ဆောင်လာတယ်။ လွှတ်တော်ကြီးတစ်ခုလုံးက လက်ပံတောင်းတောင် နောက်မှာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပြမှုပဲ။ ဒီမှာတင် ဆရာတော်တွေ ထပ်မံ အားဖြည့်ပြီး ဖယ်မပေးဖို့ - စီမံကိန်း ဖျက်မှ သပိတ်လှန်ဖို့အထိ လုပ်လာကြတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အကျပ်အတည်းထောင်ချောက်ထဲ ၀င်သွားတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဆင်ထားတဲ့ကြားထဲကို သိသိနဲ့လား မသိလို့လားမသိ။ ဒဲ့ဝင်သွားတာ တွေ့ရတယ်။
ဒေါ်စု ၂၉ ရက်နေ့ လာမယ် မလာခင် ရှင်းထားမှ ဆိုပြီး ရှင်းကြပါလေရော။ အစက ဦးအောင်မင်း သွားညှိတာ ၁၀ ရက်ကြာရင် အကြောင်းပြန်ဖို့ပဲ။ ဒေါ်စု သွားတော့ ပြည်ထဲရေးက အမိန့် တွေ ထုတ်ပြီး လုပ်လာကြပါရော။ ဒါဟာ ထောင်ချောက်ထဲ တည့်တည့် တိုးမိတာပဲ။
ဒီတော့ အခုက စပြီး ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည်ရင် ရှင်းရှင်းလေး။
သပိတ်စုံ သူပုန်ထ 101
(1) သပိတ်တွေ ပိုပြီးအားကောင်းလာရင် တောင်းဆိုချက်က ဘာလဲ။
(၀န်ချတောင်းပန်ပါ။ အဲဒီစကားက ပြည်သူ့လွှတ်တော်က စတဲ့စကား။ ပြီးတော့မှ ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ကို ရောက်သွားတာ။ သိက္ခာချချင်လို့ ပြောတဲ့စကား။)
(2) မတောင်းပန်ရင် ဘာလုပ်မလဲ။
(4) မထွက်ပေးဖူးဆိုရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။
(သူပုန်ထမယ်။ ဟိုသိမ်း ဒီသိမ်း လုပ်မယ်။)
(5) အဲဒီတော့ အစိုးရ က ငြိမ်နေမလား။
(ရဲနဲ့ ဖြိုခွင်းမယ်။ အခုလို ရေပိုက်တွေ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေနဲ့ ပေါ့။)
(6) ဒီလို ရှင်းရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
(ဆူကြ ပူကြ သောင်းကျန်းကြနဲ့ ကြည့်ကောင်းလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း။ ဒီတစ်ခါ ခေါင်းဆောင်တွေက ဒေါ်စု မဟုတ်တော့ဘူး။ ၈၈ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဆရာတော်တွေ။)
(7) အဲဒီတော့ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။
(ရှင်းရှင်းလေး။ တပ်က ပြန်ပြီး အာဏာသိမ်းလိုက်တော့ပေါ့။)
ကြည့်စမ်း -အရင်တုန်းက ၁၉၆၂ ခုနှစ်တုန်းကနဲ့ တစ်ပုံစံတည်း ဖြစ်လာမှာပါလား။ ကလင်ဒါကျ မှ တစ်ကယ့်ကို ကလင်ဒါကျ ဖြစ်နေတော့မှာ။
ဒါဆိုရင် ဒေါ်စု အခု ဘာ့ကြောင့် ရွှေပြည်အေးတရားလမ်းကို လျှောက်နေသလဲ။ ရှင်းရှင်းကလေးရယ်။ ဒါတွေကို ကြိုမြင်လို့။ ဒါတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သိထားလို့။
ဒေါ်စုကို အမည်ခံပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချလိုက်ပါလား-ဒါတော့ လွန်နေပြီ- သပိတ်မှောက်ကြတော့။ မဖြစ်သင့်ဘူး နှုတ်ထွက်ပေးပါ အမျိုးစုံအောင် အော်ဟစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေ။ ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေး ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမို အုပ်စုတွေ။ အပြင်မှာ ထောက်ပံ့ကြေး မရတော့တဲ့ ပြည်ပြေးတွေ- မီဒီယာတွေအကုန်လုံးဟာ စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အားဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ အစိုးရက ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆော်နေတာ သတိထားဖို့ လိုတယ်။
ဟော့နယူး၈ျာနယ်မှာ ဦးအောင်မင်း ပြောထားတဲ့ စကား ရှိတယ်။ ရှေ့တန်းမှာ စစ်ဆင်ရေးမှာ ဆောရီး ဆိုပြီး လုပ်လို့ မရဘူး။ အသက်ပါသွားတာပဲ ဆိုတဲ့ စကား။
အခုလည်း ဖက်တီးတို့ သတိထားကြ-နောက်ပြန်လှည့်သွားမှ ဆောရီး လုပ်လို့ မရဘူး
သတ္တိဆိုတာ နေရာမှန်မှာ အသုံးချမှ တန်ဖိုး ရှိသလိုပဲ သတိ ဆိုတာ ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ ထားခဲ့တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပဲ သိစေချင်တာပါ။
You, Thorn Nay Soe, James Mint, Rectifier Guy and 191 others like this.
Zay Yar Oo ကျနော် Copy လုပ်ပြီးရှယ်လိုက်မယ်နော်။
ငထွဋ် ကြီး တခြားဟာတွေတော့ သေချာမသိဖူး ဖက်တီးမ ဘာလဲ ဘယ်လဲဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်...
17 hours ago · Like · 13
ဒီမို ဖက်တီး သေလို့ရပြီ .....း()
17 hours ago · Unlike · 29
Zaw Min Oo ဖော့စ၇ပ်နဲ့ေ၇ဓာတ်ပြု၇င် အေ၇ပြားကို ထိခိုက်နိုင်စေပေမယ့် မီးထမလောင်ပါဘူး။ အခု ဗီဒီယိုဖိုင်အ၇ဆို စခန်းတွေ မီးလောင်နေတာ တွေ့၇ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာလို့ မှောင်မိုက်နေတဲ့ မနက် ၃နာ၇ီ အချိန်ကိုေ၇ွး၇သလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ အချိန်အနည်းငယ်ထပ်မစောင့်နိုင်လောက်အောင် ဘ...See More
17 hours ago · Like · 44
Kyaw Kyaw Oo လေထဲ မှာ တကယ် ကိုက်နေကြတာလား။ ။
ရှေ့ ဆက် ကြ ဘို့စောနေ သေးလို့ထင်တယ်။ ။
အင်း တကယ် လုပ်နေရတဲ့သူတွှေကိုတော့လေးစား ရမယ် ။ ။
ပန်း ခရေ ဒီကြေးနီတောင် ကိစ္စတွေပာာ
ဖွဘုတ်မာပဲ ပွက်လောညံနေတယ် ဒီလိုအချိန်မှာမ
ပာိုဘက်က သပိတ်စခန်းကို ဖျက်သိမ်းတဲ့ ခါ ဘုန်းကြီးတွေ ဒဏ်ရာရကုန်တာ မြင်မကောင်းအောင်ဆိုးသွားတယ်...See More
16 hours ago · Like · 64
Su Su Hlaing Very good story!
Daungkhit Burma ဒါပေမယ့်ကျနော်ပြောချင်တာကတော့ ဒေါ်စုနဲ့ ၈၈ဟာ ပြည်သူ့ ဂွေးကိုမမချင်ပဲမသွားတာပါပဲ
Nwe Hey Wan သိပ်မှန်တယ် ပန်းခရေ .................
Sai Naing Soe Win Thet Tin (( ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတွင်း နစ်နေသော၊ သန်6း0 ပြည်သူများ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများ ဘက်မှ သမာသမတ် ရှိရှိ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး
တစိုက်မတ်မတ် အစဉ်အမြဲရပ်တည်ပေးနေတာ၊ ကျွန်တော်တို့
ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ...See More
Khin Mg Ye Sein ပန်းခရေဆိုတယ့် ကလေးမလေး ပြောတာ သဘာဝကျတယ်၊ ဦးသိန်းစိန် ပြုတ်ရင် ဒေါ်စု တက်မှာပဲ လို့ ဒီမိုဖက်တီး တို့ အုပ်စုက
မျှော်လင့်နေပုံရတယ်၊ မထင်ပါဖူး၊ နောက်လာတယ့် မောင်ပုလဲ ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲ ဆိုတာတွေပဲ လာမှာပါ၊ ဦးသိန်းစိန်ကို သိတ်ကောင်းနေပါတယ်လို့ မဆိုလိုပါဖူး၊
Sai Naing Soe Win မ ပန်းခရေ သို့... ( ဦးပိုင်တွေက ချမ်းသာပီးသားပဲ သူတို့ အတွက် ဘာမမလိုတော့ဘူး ၊ ) မောင်မင်းကြီးသားတို့ချမ်းသာတာကို မနာလို မရှိပါဘူး ပြည့်စုံနေတယ် ဘာမှမလိုတော့ဘူး ဆိုရင် ၀မ်းသာရမှာပါ ( နောက်ထပ် ပြည်သူတွေ ခါးပိုက်ထဲက လာနှိုက်နေအုံးမှာ ကြောက်လို့ ပါ) -...See More
Jumping Juliet အရမ်းမိုက်ပီး အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ
ဘွ ရှင် သိုင်းလောက၏ စိမ်ခေါ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲ မြ၀တီမှ ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ ခိခိခိ ဒီမို ဖက်တီး
15 hours ago · Unlike · 9
ဘသောင်း ဟိန်း ဇာတ်ညွှန်းလေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဆရာ ...ဒီအတိုင်းပဲ ရိုက်လိုက်တော့မယ် ဟိ
Ye Moe အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ ..ရရာလက်နက်စွဲကိုင်မယ် ဆိုတဲ့သူကလည်း အခုထိရှိသေးသကိုး..ဒုက္ခ...ဒုက္ခ
Hla Myo Aung ဖွတာက မင်းကွ ခွေးဝဲစားရ
Popar Tarlay ပန်းခရေ အဲဒီလိုဆိုရင်ပြည်သူတွေက ဒီတိုင်းပဲညိမ်နေရတော့မှာပေါနော် အဲဒီလိုဆိုလိုတာလားပန်းခရေ
Naywin Lwin နောက်တစ်ခါအာဏာပြန်သိမ်းနိုင်တယ်နော်လျှော့မတွက်နဲ့
ငရဲ သား အခု နုတ်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျား ဒီနုတ်ကိုကော ဝေဖန်ပေးပါလား..။
မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံဝါဒဖြန့်ပါသလား..လို့ပါ...။...See More
ငရဲ သား နောက်တပ် နုတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ..။
တရုတ်ကိစ္စ..ခရိုနီကိစ္စ ဆူပွက်စပြုလာတိုင်း အာရုံပြောင်းသတင်းတွေ.အာရုံလွဲသတင်းတွေပွထလာတတ်တာတွေကို ၁၀ ကြိမ်ထက်မနည်း သတိထားမိလာပါတယ်...။...See More
14 hours ago · Unlike · 10
Zaw Min Oo သတင်းဖွတယ်ဆိုတာလည်း ဖွစ၇ာသတင်း၇ှိလို့လေ။ လုပ်ကြံသတင်းတွေ ပုံတွေ ဖြန့်နေတာမှ မဟုတ်ဘဲ။
သူတို့သာ အကြမ်းမဖက်ခဲ့၇င် သတင်းဖွချင်ပါတယ်ဆိုတောင် ဖွစ၇ာဘယ်၇ှိမလဲ။
သပိတ်စခန်းက လူတွေကို အပြစ်မပြောမီ မိမိလယ်မြေဆုံး၇ှုံး အလုပ်အကိုင်ဆုံး၇ှုံး မီးလောင်ခံ၇တဲ့ ဝေဒနာကို အ၇င် စာနာကြည့်ပါ။
Myo Kyaw (လက်ပံတောင်းတောင်ကလည်း ဟိုအရင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက စတင်လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ကိစ္စ။ အခုကျမှ ဖျက်သိမ်းပစ်ရင် ဦးအောင်မင်း ပြောစလို တရုတ်ကြီးနဲ့ ဘယ်လို စခန်းသွားမလဲ။ အခုဆိုရင် တရုတ်ဘက်က ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်လာပြီဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ )............................. [အရင်...See More
Myo Kyaw ပြီးတော့ ညဘက်မှောင်နဲ့ မည်းမည်းမှ မမြင်မစမ်း ဘယ်ကိုဘယ်လိုပြေးမလဲ ။ခင်ဗျားပဲ အမှောင်ထဲ လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါအုံး ။ ဘာလို့ အလင်းရောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာ အခုလိုနည်းတွေနဲ့ လူစုခွဲတာလဲ ။
မင်း သူ ဟားဟားဟာ. မင်းဟာ ကထောက်ပြနေတာ ထက်ခေါင်းစဉ်တက် ထားပုံအရ. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေနပ်တာ ရှိလို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံကြီး. ဘာမှလဲဆိုင်ဘူး
မင်း သူ အစိုးရအိမ်မွေးခွေးတွေ ခုတခါဝါဒဖြန့်ပုံက. မီဒီယာတွေ. Facebook သမားတွေ က ဖွလို့မြှောက်ပေး လို့ ဘုန်းကြီးတွေခံရတယ်ဆိုဘဲ. တရားဓမ္မနဲ့စာပေကျမ်းဂန် တေလေ့လာစည်းပူးနေ တာ မင်းတို့အစိုးရအိမ်မွေးခွေးတွေထက်ပိုပြီး. အသိတရားရှိ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဆိုရင်သိပါတယ်. မြှောက်ပေးတိုင်းက. တတ် တာဆို လို့ အစိုးရ အိမ်မွေးခွေးတွေဘဲရှိတယ်.
ပုဂံ ကွဲရှ ကြိုက်တဲ့သူတွေ မနဲဘူးဟ ကျန်တာပြောချင်တာပြော သံဃာတော့ မထိနဲ့ 
Sai Naing Soe Win Ko Thein Win ' တိန် ကနဲ ' ကို ထိတယ်ဗျာ... ဟားဟားဟား ဘာတဲ့ ( လူတွေ တကယ်သိချင်တဲ့ ဦးပိုင်ရဲ့စောရ ဇာတ်လမ်း (ရှက်ရှက်) ကို ကွက်ပြီး ဖုံးထားပေးတဲ့ Post ?
Rota Chua ဟဟ စောက်ရှက် တစ်စက်မှ မရှိတဲ့ ပိုစ့်
Nandar Kyaw ရေနဲ့ ပက်ပြီးမှ မီးခိုးဗုံးသုံးတဲ့အခါ မီးခိုးဗုံးမှာ ပါတဲ့ ပေါ့စဖတ်နဲ့ ရေ ဓါတ်ပြုပြီး အက်ဆစ် ဖြစ်သွားတယ်။ This incedent is not "accident".
For the information, every materials describe materail safety data sheet. without understadning or without prop...See More
Nandar Kyaw http://www.csb.gov/
Nandar Kyaw http://en.wikipedia.org/wiki/Material_safety_data_sheet
Ryo Miyaichan သမ္မတအနေနဲ့ ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး မှားသွားရင် တောင်းပန်ရမှာဘဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မတော်တဆဖြစ်ဖြစ် တမင်သက်သက်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အားလုံးဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းပန်ရမှာဘဲ။ နိုင်...See More
Htin Lin Soe Lotus Man အ လား aအ လာ မ ကောင်း လွန်း လို့ ပြော မိ ပါ သည်။
အ ကြိမ် ကြိမ် အ ခါ ခါ တ ရုတ် နဲ့ ပြ သ နာ ဖြစ် လို့ မ ကောင်း ပါ။ မီး မ ရှိ တဲ့ တိုင်း ပြည် မှာ မီး ကြိုး တွေ အ တွက် ကြေး နီ လိုပါ တယ်။ထို့ အ တူ ပြည် သူ ရဲ့ အ ခွင့် အ ရေး လဲ ကာ ကွယ် ဖို့ လို မှာြ...See More
Burma Thwe good post...but really funny ... LOL ...........
Bay Mgmg အမှန်ပါဘဲ။good but bad....
Min Zaw Moe ကိုယ်ထင်ချင်တာကို လမ်းကြောင်းပေးပြီးပြောသွားတာပဲ။ နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး မြန်မာကားတကားလောက်ရိုက်ပါလား ။
Thiha Thiha ပာားပာား ပီားပီား။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တယ်မပြောပါနဲ့ ရှေ့ကိုမသွားရသေးတာလေ ငပေါရဲ့
မိုး စဲ အာဏာထပ်သိမ်းစရာ လိုလို့လား..ခုလဲ သိမ်းထားတာပဲ ခပ်ပေါပေါတွေ ခပ်ကြောင်ကြောင်တွေ မတွေးကြပါနဲ့..ကာလုံထဲမှာ အရပ်သား ဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲ ပါတဲ့ကောင်ကလဲ ကြံဖွတ် ဖွဲ့စည်းပုံကိုလဲ ကြည့်ဦး..သူတို့ လူရာမ၀င်လို့ ဒေါ်စုတို့ကို ဒီမိုကရေစီနဲ့ မျှားခေါ်နေရတာ..လက်ပံတောင်းတောင် ဆိုတာ သူတို့ အကျိုးစီးပွား ထိရင် မီးပွင့်မယ် ..ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး လို့ ထင်လို့ ဒီသောက်ချိုး ချိုးခဲ့တာ..
Khin Kalayah Soe နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ မပြောနဲ့ ရှေ့ကို မရောက်သေးတာလေ စောက်ပေါရဲ့။
Pa Yit ပလေတို ဒီမို ...........သို့
15 minutes ago · Edited · Unlike · 3
Myo Sam သိန်းစိန်ဘောမချင်တဲ့ ကောင်တွေ....!
Lay Min မှန်လိုက်လေဘာမှရှေ့ကိုမသွားရသေးဘူးကွနွားမသားရ
David Mg Lay ပိုစ့်ရေးထားတဲ့ ဘသားချောကလည်း သိသိသာသာကြီးကိုဘက်လိုက်ချပါလေရောလားဗျ။။ မင်းတို့ဒီမိုတွေဘာဘဲ့လုပ်လုပ် ငါတို့စစ်တပ်ကမကြိုက်ရင် အာဏာပြန်သိမ်းမယ်ကွ ဆိုတဲ့ ပုံစံလာဖမ်းနေရသလားကွယ်။။
Thuthu Zaw Min အခု ဖြစ်စဉ်မှာ အမေစုမလာခင် ရှင်းလိုက်တယ် ၊ အမေစုကို ချောက်ချနိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ဖန်တီးတယ် ၊ ပြီးတော့ လွှတ်တော်က စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးစုံစမ်းမယ်ပြောထားတာကို မကျ
Ko Si Thu နည်းနည်းတော့ အူကြောင်ကြောင်နိုင်သလိုပဲ.... ဦးသိန်းစိန် ဒီလိုအမိန့်ပေးတာ မဖြစ်နှိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်နှိုင်ပါတယ်.... ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီတိုင်းပြီးလို့မှ မရတာပဲ.... phosphorous ဗုံးကို ဒီလိုဖြစ်တတ်မှန်းမသိဘူးဆိုတာတော့ လက်မခံနှိုင်သလိုပဲ.... ဒီပစ္စည်းကို သုံးနေတယ့်လ...See More
Tun Wai သေလိုက် ဟ ဇာတ်ညွှန်းမကောင်းလို့နံမယ်ပါသေပြီ
ဒီမို ဖက်တီး မအေ-ိုး ပလေတို .... ဟား ဟားးး
ပုရစ် ပေးပို့ ပါတယ်